गुनासो | Law & More B.V.
ब्लग » गुनासो
गुनासो के हो?
नेदरल्याण्ड्समा गुनासो एक पछि सम्बन्ध विच्छेद पछि आफ्नो पूर्व पार्टनर र बच्चाहरूको बाँच्न लागत को लागी एक आर्थिक योगदान हो। यो एक रकम हो जुन तपाइँले प्राप्त गर्नुहुन्छ वा मासिक तिर्नु पर्छ। यदि तपाईंसँग बाँच्नको लागि पर्याप्त आय छैन भने, तपाईं भत्ता पाउन सक्नुहुनेछ। सम्बन्ध विच्छेद पछि आफैंले आफैलाई सहयोग गर्न यदि तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग अपर्याप्त आम्दानी छ भने तपाईंले भत्ता पाउनु पर्नेछ। विवाहको समयमा बस्ने जीवन स्तरलाई ध्यानमा राखिनेछ। तपाइँसँग एक पूर्व पार्टनर, पूर्व-पंजीकृत साझेदार र तपाइँका बच्चाहरूलाई समर्थन गर्नको लागि दायित्व हुन सक्छ।
बच्चा गुनासो र साथीको गुजारा
एक सम्बन्ध विच्छेद को घटना मा, तपाइँ साथी साथी र बच्चा गुनासो संग सामना हुन सक्छ। पार्टनर गुनासो को सम्बन्ध मा, तपाईं आफ्नो पूर्व पार्टनर संग यस बारे मा सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्झौताहरु एक वकिल वा नोटरी द्वारा लिखित समझौता मा राखिन्छ। यदि सम्बन्ध विच्छेदको समयमा पार्टनरको भत्तामा केहि पनि सहमत भएको छैन भने तपाईले पछि गुनासोको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि तपाईको स्थिति वा तपाईको पूर्व पार्टनर परिवर्तन भएको खण्डमा। यदि अवस्थित पोटगी व्यवस्था अब व्यावहारिक छैन, तपाईं नयाँ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ।
बच्चा गुनासोको सम्बन्धमा, सम्बन्ध विच्छेदको समयमा पनि सम्झौता गर्न सकिन्छ। यी सम्झौता एक प्यारेन्टिंग योजना मा राखिएको छ। यस योजनामा ​​तपाईंले आफ्नो बच्चाको हेरचाह वितरणको पनि प्रबन्ध मिलाउनुहुनेछ। यस योजनाको बारेमा अधिक जानकारी हाम्रो पृष्ठमा यस बारे मा पाउन सकिन्छ प्यारेन्टिंग योजना। बच्चा २१ वर्षको उमेरमा नपुगुञ्जेल बाल गुनासो रोकिदैन। सम्भावना यो उमेर भन्दा पहिले रोकिन्छ, हुनसक्छ यदि बच्चा आर्थिक तवरमा स्वतन्त्र छ वा कम्तिमा न्यूनतम युवा मजदूरीको साथ काम भएको छ भने। हेरचाह गर्ने अभिभावकले बच्चाको उमेर १ 21 वर्ष नपुगुञ्जेल बच्चा समर्थन प्राप्त गर्दछ। त्यसपछि, रकम सीधै बच्चामा जान्छ यदि हेरचाह दायित्व लामो समय सम्म रह्यो। यदि तपाईं र तपाईंको पूर्व पार्टनर बच्चा समर्थन मा सम्झौता गर्न सफल भएन भने, अदालत एक रखरखाव व्यवस्था मा निर्णय लिन सक्छ।
तपाईं कसरी गुनासो गणना गर्नुहुन्छ?
गुनासो theणीको क्षमता र रखरखावको हकदारको व्यक्तिको आवश्यकताको आधारमा गणना गरिन्छ। क्षमता पोटली भुक्तानी गर्नेले छुट्याउन सक्ने राशि हो। जब दुबै बच्चा गुनासो र साझेदार गुनासो लागू गरिन्छ, बच्चा समर्थन सधैं प्राथमिकता लिन्छ। यसको मतलब यो छ कि बच्चा गुनासो पहिले गणना गरिन्छ र, यदि त्यहाँ पछि कोठा छ भने, साझेदार भत्ता गणना गर्न सकिन्छ। तपाईं वैवाहिक गुजारा मात्र पाउनु हुन्छ यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ वा दर्ता गरिएको साझेदारीमा। बच्चा गुनासो को मामला मा, आमा बुबा बीच सम्बन्ध अप्रासंगिक छ, आमा बुबा एक सम्बन्ध मा छैन भने पनि, बच्चा भत्तामा अधिकार छ।
भत्ता रकमहरू हरेक वर्ष परिवर्तन हुन्छन्, किनकि ज्याला पनि परिवर्तन हुन्छ। यसलाई अनुक्रमणिका भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष, तथ्या Netherlands्क नेदरल्याण्ड्स (सीबीएस) द्वारा गणना गरेपछि न्याय र सुरक्षा मन्त्रीद्वारा प्रत्येक अनुक्रमणिका प्रतिशत सेट हुन्छ। सीबीएसले व्यापार समुदाय, सरकार र अन्य क्षेत्रहरूमा तलब विकासको अनुगमन गर्दछ। नतिजाको रूपमा, पनीर राशि १ जनवरीमा हरेक वर्ष यो प्रतिशतले बढ्छ। तपाईं सँगै सहमत हुन सक्नुहुन्छ कि वैधानिक अनुक्रमणिका तपाईंको गुनाखोरीमा लागू हुँदैन।
तपाई कति समयसम्म मर्मतको हकदार हुनुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो पार्टनरसँग सहमत हुन सक्नुहुन्छ कि कहिलेसम्म भत्ता भत्ता जारी हुनेछ। तपाइँ अदालतलाई समयसीमा निर्धारित गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि केहि पनि सहमत भएको छैन भने कानूनले कति लामो समयसम्म रखरखाव भुक्तान गर्नुपर्नेछ भनेर नियमित गर्दछ। हालको कानूनी नियमको मतलब यो छ कि गुनासो अवधि अधिकतम half बर्षको विवाहको आधा अवधि बराबर हो। त्यहाँ यसका अपवादहरू छन्:
यदि, सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन फाइल गरेको समयमा, विवाहको अवधि १ 15 बर्ष भन्दा बढी छ र मर्मत itorणदाताको उमेर १० बर्ष भन्दा कम राज्य पेन्सन उमेर भन्दा कम छैन भने, दायित्व समाप्त हुनेछ जब राज्य पेन्सन उमेर पुगेको छ। तसर्थ यदि सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्ध विच्छेदको समयमा राज्य पेंशन उमेर भन्दा १० बर्ष पहिले छ भने यो अधिकतम १० बर्ष हो। त्यसपछि राज्य पेन्सन उमेरको सम्भावित स्थगनले दायित्वको अवधिलाई असर गर्दैन। यस अपवाद यसैले दीर्घकालीन विवाहमा लागू हुन्छ।
दोस्रो अपवाद युवा बच्चाहरू संग परिवार चिन्तित। यस अवस्थामा, दायित्व जारी रहन्छ विवाहको कान्छो बच्चा १२ वर्षको उमेरमा पुग्न नसक्दासम्म यसको मतलब यो छ कि गुनासो अधिकतम १२ बर्षसम्म रहन सक्छ।
तेस्रो अपवाद एक संक्रमणकालीन व्यवस्था हो र यदि विवाह कम्तिमा १ 50 बर्षसम्म चलेको छ भने 15० बर्ष वा माथिका रखरखाव लेनदारहरूको रखरखावको अवधि बढाउँदछ। १ जनवरी १ 1 .० मा वा अघि जन्मेका मर्मत लेनदारहरूले अधिकतम years बर्षको सट्टा अधिकतम १० बर्षको लागि मर्मत प्राप्त गर्नेछन्।
गुनासो सुरु हुन्छ जब डिभोर्स फरमान नागरिक स्थिति अभिलेखमा राखिएको हुन्छ। अदालतले तय गरेको समयावधि सकिएपछि भत्ता रोकिन्छ। यो पनि समाप्त हुन्छ जब प्राप्तकर्ताले पुनःविवाह गर्दछ, cohabits वा दर्ता गरिएको साझेदारीमा प्रवेश गर्दछ। जब कुनै एक पार्टीको मृत्यु हुन्छ, गुजारा भुक्तानी पनि बन्द हुन्छ।
केहि केसहरूमा भूतपूर्व पार्टनरले अदालतलाई गुनासो विस्तार गर्न भन्न सक्छ। यो केवल १ जनवरी २०२० सम्म गर्न सकिन्छ यदि भिक्षुणीको अन्त्य यति टाढा थियो कि यथोचित र निष्पक्ष रूपमा आवश्यक हुन सक्दैन। १ जनवरी २०२० देखि, यी नियमहरू थोरै लचिलो बनाइएको छ: भोलिपल्ट विस्तार गर्न सकिन्छ यदि समाप्त हुने पार्टीको लागि उचित छैन भने।
गुजारावार निर्धारण, परिमार्जन वा अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरू गर्न सकिन्छ। तपाईंलाई जहिले पनि एक वकिलको आवश्यक हुन्छ। पहिलो चरण भनेको अनुप्रयोग फाईल गर्नु हो। यस अनुप्रयोगमा, तपाईले न्यायाधीशलाई निर्धारण गर्न, परिमार्जन गर्न वा मर्मत रोक्न भन्नुहोस्। तपाईंको वकिलले यो आवेदन बनाउँदछ र यसलाई जिल्लाको अदालतमा दर्ता गराउँछ जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ र जहाँ मुद्दा हुन्छ। के तपाईं र तपाईंको भूतपूर्व पार्टनर नेदरल्याण्ड्समा बस्नुहुन्न? त्यसपछि आवेदन हेगको अदालतमा पठाइनेछ। तपाईंको पूर्व पार्टनरले त्यसपछि एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्नेछ। दोस्रो चरणको रूपमा, तपाईंको पूर्व पार्टनरसँग डिफेन्सको स्टेटमेन्ट सबमिट गर्ने अवसर छ। यस प्रतिरक्षामा ऊ वा उनीले वर्णन गर्न सक्दछन् किन कि गुनासो भत्ता पाउन सकिदैन, वा किन कि गुजारा भत्ता समायोजित गर्न वा रोक्न सकिदैन। त्यो केसमा अदालतमा सुनुवाई हुनेछ जहाँ दुवै साझेदारहरूले आफ्नो कथा भन्न सक्दछन्। त्यस पछि अदालतले निर्णय लिनेछ। यदि कुनै पक्ष अदालतको निर्णयसँग असहमत छ भने, उसले वा उनी अपीलको अदालतमा अपील गर्न सक्दछन्। त्यो अवस्थामा, तपाईंको वकिलले अर्को निवेदन पठाउँनेछ र अदालतले केस पूर्ण रूपमा पुन: परीक्षण गर्नेछ। त्यसोभए तपाईंलाई अर्को निर्णय दिइनेछ। त्यसपछि तपाईं सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं अदालतको निर्णयसँग फेरि सहमत हुनुहुन्न भने। सर्वोच्च अदालतले केवल यो जाँच गर्दछ कि अदालतले अपीलको अदालतले कानून र प्रक्रियागत नियमहरूको राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ र अदालतको निर्णय पर्याप्त रूपमा स्थापित छ कि छैन। तसर्थ, सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सारमा पुनर्विचार गर्दैन।
के तपाइँसँग गुनासोको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा तपाइँ आवेदन दिन, परिवर्तन गर्न वा गुजारा पनी बन्द गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए कृपया को पारिवारिक कानून वकीलहरूको सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रा वकिलहरू गुजारा भत्ता गणना (रे) मा विशेषज्ञ छन्। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई कुनै पनि गुटखाई कार्यवाहीमा सहयोग गर्न सक्छौं। मा वकीलहरू Law & More पारिवारिक कानूनको क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र यस प्रक्रिया मार्फत तपाईको पार्टनरसँगै गाइड गर्न खुशी छन्।
अघिल्लो पोस्ट इन्टरप्राइज चेम्बरमा एक जांच प्रक्रिया
अर्को पोस्ट काम अस्वीकार